अर्बपति (म्याक्सिम गोर्की) | Anup Joshi । Poet । Photographer । Nepal।
Tweets by @AnupJosi
Home Nepali articles अर्बपति (म्याक्सिम गोर्की)
अर्बपति (म्याक्सिम गोर्की)
आफ्नो साहित्यिक नाम 'म्याक्सिम गोर्की'ले परिचित अलेक्सी म्याक्सिमोवीच पेश्चकोव(१८६८-१९३६) एक रुसी लेखक, नाटककार र राजनैतिक अभियन्ता थिए । उनलाई सामाजिक यथार्थवादी अभियानको महत्वपूर्ण व्यक्तित्वका रुपमा लिइन्छ । ११ वर्षको उमेरमा अनाथ बनेका उनी १२ वर्ष हुँदा भागेका थिए र १९ वर्षको उमेरमा आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि भने उनले पाँच वर्षसम्म पैदल रुपमा रुसी साम्राज्यको भ्रमण गरे । यो समयमा उनले धेरै जागिरहरू परिवर्तन गरेका थिए र त्यसबेलाका आफ्ना अनुभवहरूलाई समेटेर पछि साहित्य सिर्जना गर्न थाले । उनी ५ पल्टसम्म साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनयनमा समेत परेका थिए । उनी त्यसबेलाको रुसी सारहरूको सत्ताको खुला रुपमा विरोध गर्थे र मार्क्सवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । उनी अर्का दुई चर्चित रुसी लेखकहरू लियो टोल्स्टोय र आन्तोन चेखवसँग पनि निकट थिए, जसलाई उनले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन् । सुरुमा भ्ल्यादिमिर लेनीनसँग निकट रहेका उनी पछि लेनीनको आलोचक बनेका थिए । रुस र सोभियत संघबाट निकालिएका उनले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण भाग निर्वासनमा बिताउनुपर्यो । पछि उनलाई जोसेफ स्टालिनले व्यक्तिगत रुपमा रुसमा बोलाए र उनले रुसमै मृत्युवरण गरे । उनका चर्चित कृतिहरूमा 'मदर', 'माई चाइल्डहुड', चिल्ड्रेन अफ द सन' आदि पर्छन् । प्रस्तुत छ अनुप जोशीले उनको कथा 'द बिलिनेयर'लाई अंग्रेजीबाट नेपालीमा गरेको अनुवाद:
संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्टीलका राजा, पेट्रोलका राजा र अन्य राजाहरूले सधैं मेरो कल्पनाशक्तिलाई उच्चतम् विन्दुमा पुर्याएर रोमान्चक बनाउने गरेका छन् । मलाई यस्तो लाग्छ कि यी निश्चित व्यक्तिहरू जोसँग अनगिन्ती पैसा छ, ती अरु सामान्य मान्छेजस्ता नाशवान हुन सक्दैनन् ।
मैले आफैंलाई भनें कि उनीहरूमध्ये प्रत्येकसँग कम्तिमा पनि ३ वटा पेट र १५० वटा दाँत हुनुपर्छ । मलाई कुनै शंका थिएन कि करोडपतिहरू बिहान छ बजेबाट मध्यरातसम्म कुनै मध्यान्तर बिना नै लगातार खाइरहन्छन् । र त्यो पनि संसारकै शानदार भोजन ! दिनभरि चपाउँदा-चपाउँदा उनीहरूलाई पट्यार लाग्दो हो र मैले कल्पना गरेको छु कि साँझतिर उनीहरू आफ्नो नोकरहरूलाई आफूले निलेको भोजन सन्तुष्टिपूर्वक पचाइदिन आदेश दिन्छन् । पूर्ण रुपमा लल्याकलुलुक भएर छटपटी र पसिनाले लत्पतिएको उसलाई नोकरहरूले विछ्यौनामा लगेर निकै सावधानीपूर्वक सुताउँदा हुन्, ताकि भोलिपल्ट उठ्नेबित्तिकै बिहानै छ बजेबाट उसले आफ्नो भोजन कार्य आरम्भ गर्न सकोस् ।
यद्यपि त्यस्ता मान्छेले जतिसुकै कष्ट सहेर खाए पनि आफ्नो अथाह सम्पत्तिबाट आउने ब्याजको आधामात्रै पनि खाएर सक्न असम्भव हुँदो हो ।
निश्चित रुपमा त्यस्तो जीवन नारकीय छ, तर कसले के नै गर्न सक्छ र? केका लागि कोही करोडपति बन्छ? उफ्, म के भनिरहेछु ! केका लागि कोही अर्बपति बन्छ जब ऊ एक सामान्य नश्वर मानिसले भन्दा धेरै खान सक्दैन भने? मैले आफैंमा कल्पना गरें कि अर्बपतिहरूले सुनका बुट्टा भएका लुगा लगाउँदा हुन्, सुनका जुत्ता लगाउँदा हुन् र ह्याटको सट्टा टाउकोमा हिरा र मणिजडित मुकुट लगाउँदा हुन् । संसारको सबैभन्दा महँगो मखमलले बनेको उसका सुनका टाँक भएका लुगाहरूको लम्बाइ कम्तिमा पनि ५० फिट हुँदो हो र विदाको दिनमा ऊ आवश्यताले गर्दा अर्को ६ जोर महंगा ट्राउजरहरू लगाउन बाध्य हुँदो हो । पक्कै पनि त्यस्तो लुगा लगाउँदा अप्ठ्यारो महसुस हुँदो हो, तर त्यतिविधि धनी भएपछि त अरु मान्छेहरूले लगाए जस्तो पहिरन त लगाउन मिलेन नि !
केका लागि कोही अर्बपति बन्छ जब ऊ एक सामान्य नश्वर मानिसले भन्दा धेरै खान सक्दैन भने?
मैले कल्पना गरें कि अर्बपतिहरूको खल्ती यतिविघ्न ठूलो हुन्छ होला कि त्यहाँ सजिलैसँग चर्च र पूरै संसद अटाउन सक्छ । त्यस्ता महान् व्यक्तिहरूको पेट त यति ठूलो हुन्छ होला कि त्यहाँ समुद्र नै अटाउन सक्ला, कति लम्बाइ र चौडाइ होला भनेर त खै ! मैले कल्पना नै पो गर्न सकिनँ । उसको कोठाको बारेमा सोच्न खोज्दा पनि मेरो दिमागमा कुनै स्पष्ट चित्र नै आउन सकेन, तर मलाई लाग्छ कि त्यो कम्तिमा पनि दुई हजार वर्ग यार्ड त हुन्छ होला । र यदि ऊ सुर्ती खान्छ भने नि:सन्देह उसले सर्वोत्कृष्ट गुणस्तरको खाँदो हो र एकपल्टमा कम्तिमा पनि एक किलो सुर्ती मुखमा हाल्दो हो । नशा तान्ने बेलामा पनि उसले कम्तिमा एकपल्टमा आधा किलो त सुंघ्दो हो । यसो गर्दा अलिअलि भएपनि पैसा खर्च हुन्छ नि !
उसका हातहरूमा आफूले चाहे अनुसार तन्किने जादूमय इच्छाधारी शक्ति हुँदो हो । मैले कल्पनामा न्यूयोर्कको एक अर्बपतिले आफ्नो हात तन्काएर कतै साइबेरियातिर गुँडेको एक डलरको सिक्कालाई आफू एक इन्च पनि नहल्लिकन तानेको देखेको छु ।
उत्सुकतापूर्वक सोच्दै गर्दा मैले यो विशाल जीवको टाउको कत्रो होला भनेर स्पष्ट आकृति कल्पना गर्न सकिनँ । संसारका हरेक कुराबाट पैसा सोस्नका लागि निर्मित भएका राक्षसका जस्ता जब्बर मांशपेशी र हड्डीयुक्त यो जीवको टाउको त पक्कै पनि बडेमानको हुँदो हो ।
कसले नै त्योबेलाको मेरो आश्चर्यलाई बुझ्न सक्ला र ? जतिबेला म यस्तै एउटा धनी मान्छेको अगाडि हुँदा यो निष्कर्षमा आएँ कि एउटा अर्बपति पनि अरु मानवहरूजस्तै पो हुँदो रहेछ ।
मैले त्यहाँ एउटा अग्लो बूढो मान्छे आर्मचेयरमा बसिरहेको देखें । उनले आफ्ना खैरा हातहरू बाँधेर बसेका थिए र उनको शरिर सामान्य आयतनको थियो । उनले अनुहारको नरम छाला सावधानीपूर्वक खौरिएका थिए । उनका आँखाहरू रंगहीन थिए र आँखीभौं पनि थिएन । तालु खुइलिएको थियो । उनको कोमल छाला हेर्दा नवजात शिशुको जस्तै लाग्थ्यो । उनी आफ्नो जीवनको सुरुवातमा थिए कि अन्त्यमा आइपुगिसकेका थिए भनेर मलाई छुट्याउनै मुस्किल पर्यो ।
उनको पहिरनमा यस्तो केही पनि थिएन जसले उनलाई एउटा सामान्य मानिस भन्दा भिन्न देखाओस् । उनको शरिरमा भएको सुनमा एउटा औंठी, घडी र उनका दाँतहरू मात्र थिए । सबै जोडेर मुस्किलले एक पाउ जति पनि थिएन होला । वास्तवमा भन्नुपर्दा ती मान्छेको हुलिया हेर्दा त उनी युरोपको कुनै सम्भ्रान्त परिवारमा काम गर्ने बूढो नोकर जस्तो देखिन्थे ।
उनले मलाई भेट दिएको कोठाको साजसज्जा पनि उस्तो केही विशेष थिएन । फर्निचरहरू निकै गरुङ्गा खालका थिए, त्यति मात्र भन्न सकिन्छ । ती फर्निचरहरू देखेर मलाई सायद यस घरमा हात्तीहरू आउने गर्छन् होला जस्तो लाग्यो ।
‘के तपाईं अर्बपति हुनुहुन्छ?’, मैले उनलाई सोधें किनभने मैले आफ्ना आँखाहरूलाई विश्वास गर्न सकिरहेको थिइनँ ।
‘अवश्य पनि!’, टाउको हल्लाउँदै उनले उत्तर दिए ।
‘तपाईं नास्तामा कति मासु खान सक्नुहुन्छ?’
‘म बिहान कहिले पनि मासु खाँदिन’, उनले भने । ‘एक चौथाइ सुन्तला, एउटा अण्डा र एक कप चिया मात्र खान्छु...’
बच्चाका जस्ता उनका निर्दोष आँखाहरू दुई थोपा हिलाम्य पानी जस्तै गरी उत्साहरहित तबरले झिम्किरहेका थिए ।
उनको पहिरनमा यस्तो केही पनि थिएन जसले उनलाई एउटा सामान्य मानिस भन्दा भिन्न देखाओस् । उनको शरिरमा भएको सुनमा एउटा औंठी, घडी र उनका दाँतहरू मात्र थिए । सबै जोडेर मुस्किलले एक पाउ जति पनि थिएन होला ।
‘उत्तम’, म फेरि सुरु भएँ, ‘तर मसँग इमान्दार भएर कुरा गर्नुस् । मलाई सबै सत्य बताउनुहोस् । दिनमा कतिपल्ट खानुहुन्छ?’
‘दुईपल्ट’, शान्तिपूर्वक उनले जवाफ दिए, ‘नास्ता र रात्रीभोजन भए मलाई पर्याप्त हुन्छ । दिउँसो भने म अलिकति सुप, थोरै सेतो मासु, तरकारी, फलफुल, एक कप चिया र सिंगार पिउँछु ।
म आश्चर्यचकित भएँ । लामो सास लिएँ र फेरि सोधें:
‘तर यदि यो सत्य हो भने तपाईं आफ्नो पैसाले के गर्नुहुन्छ?’
‘त्यो लगानी गरेर अझै अरु पैसा कमाउँछु’
‘त्यसबाट अझै धेरै पैसा कमाउनका लागि !’
‘के-का लागि त?’, मैले दोहोर्याएँ ।
उनी आफ्ना हातहरू कुर्सीको बिटमा राख्दै म भएतर्फ झुके र उत्सुकता व्यक्ति गर्दै भने:
‘पक्कै पनि तिम्रो दिमाग खुस्केको जस्तो छ?’
‘र तपाईंको नि?’, मैले प्रतिप्रश्न गरें ।
बूढाले आफ्नो सुनका दाँतहरूबाट सुस्केरा हाल्दै आफ्नो टाउको हल्का झुकाए ।
‘कस्तो हाँसोलाग्दो होला...तपाईं तपाईंको वर्गको पहिलो व्यक्ति हो जसलाई मैले भेटें’
त्यसपछि उनले आफ्नो टाउको उठाए र केहीबेर चुपचाप मलाई हेरे ।
‘तपाईं के गर्नुहुन्छ?’, मैले फेरि सुरु गरें ।
‘पैसा कमाउँछु’, उनले छोटो उत्तर दिए ।
‘ए, त्यसोभए तपाईं नक्कली नोट छाप्नुहुन्छ?’, रहस्यको पींधसम्म पुगेकाले म हर्षोल्लासका साथ चिच्याएँ । तर ती अर्बपति भने डराए । उनको सारा शरिर काँप्यो र आँखाहरू यताउता घुमे ।
‘त्यस्तो होइन’, अलि शान्त भएपछि उनले भने । त्यसपछि उनले आफ्नो गाला फुलाए, तर किन भनेर मैले बुझिनँ ।
मैले यसो विचार गरें र फेरि उनलाई प्रश्न गरें:
‘त्यसो भए तपाईं कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ त?’
‘ए, त्यो त निकै सामान्य कुरा छ । मसँग रेलमार्ग छ । किसानहरूले बिक्रीयोग्य कुराहरू उत्पादन गर्छन्, जसलाई मैले बजारसम्म ढुवानी गर्छु । मैले आफ्नो सुझबुझले हिसाब गर्छु कि मैले कति पैसा किसानहरूलाई दिनुपर्छ ताकि उनीहरू भोकै नरहून् र निरन्तर रुपमा अन्न फलाइरहून् । बाँकी पैसा ढुवानी खर्चको नाममा म आफैं राख्छु । यो पक्कै पनि सामान्य कुरा छ, हैन त?’
‘र किसानहरू त्यतिमै सन्तुष्ट हुन्छन्?’
‘मलाई लाग्छ, हुँदैनन् होला’, उनले बच्पना झल्काउँदै जवाफ दिए । ‘तर भनिन्छ नि, मान्छेहरू कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । संसारमा जहिले पनि त्यस्ता पृथक पात्रहरू हुन्छन् जसले अझै धेरै भन्दा धेरै चाहन्छन्..’
Anup Joshi is an emerging young writer searching for space in Nepali literature. He writes poems, stories and lyrics for songs. Asastudent of English literature he loves reading books. He is alsoapassionate photographer and enjoys travelling.
आंतोन चेखवको कथा जसलाई चोरेर वीपीले 'दोषी चश्मा' लेखे भन्ने आरोप लाग्छ
एउटा कारिन्दाको मृत्यु आंतोन चेखव (१९८०-१९०४) एक चर्चीत रुसी नाट्यकार तथा कथाकार थिए जसलाई इतिहासकै सबै भन्दा महान् कथाकार मानिन्छ । ...
Alienation of Modern Man in Eliot’s “The Love Song of J. Alfred Prufrock” and Mann’s Death in Venice
-Anup Joshi Alienation of Modern Man in Eliot’s “The Love Song of J. Alfred Prufrock” and Mann’s Death in Venice This paper explor...
Partition Trauma in Balachandra Rajan’s The Dark Dancer
-Anup Joshi Partition Trauma in Balachandra Rajan’s The Dark Dancer T his paper explores the partition trauma in Balachandra Rajan...
हंगकंगको आन्दोलन, नेपाल सरकार र गुठी विधेयक
- अनुप जोशी पछिल्लोसमय हंगकंग सरकारले जनताको मनोभावना नै नबुझी ल्याएको सुपुर्दुगी सम्बन्धि विधेयकले अहिले हंगकंगमा आगो बालिरहेक...
पिता: एक लोग्ने-मान्छे [ कविता ]
पिता : एक लोग्ने-मान्छे - अनुप जोशी ओ पिता ! जतिबेला तिम्ले मेरी आमासँग बिहे रच्यौ र सुहागरातको उन्मादमा लत्पत्तियौ तेतीबेला ...
Tyo chhutne din
Watch my song..
कविता ( 27 )
गीत (7)
Anup Joshi Photography
Copyright © 2015 Anup Joshi । Poet । Photographer । Nepal।